​रामशरणलाई कार्यकर्ताको प्रश्न, कांग्रेसको झोला कहिलेसम्म बोक्ने ?
Tuesday, 10 Jan, 2017 9:24 AM
• पहिलाद राना
२६ पुस, महेन्द्रनगर । सोमबार दिउँसो नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरको पार्टी कार्यालय महेन्द्रनगरमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पुर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसहितको एक टोली पुग्यो ।
दिउँसो १२ बजे नै महत आउने कार्यक्रम रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी लगायत विभिन्न भातृ संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पार्टी कार्यालयमा उनको प्रतिक्षामा थिए । झण्डै २ बजेपछि मात्रै महत महेन्द्रनगरस्थित पार्टी कार्यालय पुगेका थिए ।
पटक पटक अर्थमन्त्री हुँदा समेत महिला, बालबालिका, बृद्ध, ज्येष्ठ नागरिकको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै रुष्ट भएका अधिकांश कार्यकर्ताहरुले उनको कामबारे टिकाटिप्पणी गरिरहेका थिए ।
स्वागत तथा पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस कञ्चनपुरका कार्यकर्ताहरुले महतसामु गुनासाका पोका पन्तुरा खोले । पुरुष कार्यकर्ताहरुले कृषि, बृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब लगायत यावत विषयमा गुनासो पोखे । कांग्रेस कार्यकर्ताकै रुपमा जीवन व्यतित् गरेका बृद्ध कार्यकर्ताले पार्टीले आफूहरुको कदरसमेत नगरेको गुनासो पोखे ।
महिला कार्यकर्ताहरुको गुनासो भने अलि पृथक थियो । उनीहरुको भनाइ थियो कांग्रेसले झोला बोकाउने बाहेक अन्य कुनै जिम्मेवारी नदिएको उनीहरुको गुनासो थियो । गाउँ र वडा तहका समितिमा समेत आफूहरुले तल्लो तहमै बस्नु परिरहेको उनीहरुले गुनासो गरे । पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा महिलाहरुले झोला बोक्ने मात्रै जिम्मेवारी पाएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरकी महिला नेत्री निलम जोशीले महिलालाई झोला बोकाउने बाहेक कुनै पनि अवसर नदिएको गुनासो पोखिन् । ‘नेता ज्यू कञ्चनपुरका महिला कांग्रेसका नेतृपनि समक्ष छन्, तर पनि किन हामीलाई अबसरबाट बञ्चित गराउनुभयो,’ उनले भनिन् ‘हामीले तपाईका झोला कहिलेसम्म बोल्ने ।’ लगातार दुई पटकको संविधान सभा निर्वाचन २०६४ र २०७० मा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षबाट कञ्चनपुरका कुनै पनि महिलाहरुलाई टिकट नदिएको उनको गुनासो थियो ।
नेपाल महिला संघ कञ्चनपुरकी अध्यक्ष मधु भारतीले पनि कांग्रेसले महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा केही गर्न नसकेको गुनासो गरिन् । आगामी निर्वाचनमा महिलाहरुलाई विषेश प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको माग छ ।
कांग्रेस निकट नेपाल दलित संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष रमेश दयालले वर्तमान मन्त्रीपरिषद्मा कांग्रेसबाट कुनै पनि दलित नेतालाई मन्त्री नबनाएकोप्रति गुनासो गरे ।